FRANTSA Voan’ny Coronavirus i Julien Lepers
Ny 24 martsa 2020 no nanambaran’i Julien Lepers, tamin’ny tambazotran-tserasera Twitter, fa eo ho eo ihany ny fahasalamany ary reradreraka ny vatany noho ny coronavirus, nahazo azy efa sivy andro taorian’ny fanentanana lanonana nataony. Teratany frantsay, mpanentana fandaharana kolontsaina malaza « Question pour un Champion » amin’ny televiziona i Julien Lepers. Mpiahy ny hetsika « Festival des Baleines » mpiseho isan-taona ao Sainte-Marie Madagasikara ihany ko izy. 70 taona ny lehilahy ankehitriny.
Ho lasa ivon’ny valanaretina ihany koa
Tafiakatra 1000 mahery ny olona maty ho an’i Etazonia. Ny 1/3 amin’ireo maty dia tao amin’ny fanjakan’i New York, ary efa nisy ny fanairana nataon’ny Governora amin’ny tsy ho fahampian’ny fandriana sy ny fitaovana manampy amin’ny fisefoana. Mahatratra 70 000 ireo trangan’aretina efa voamarina, ary efa nilaza ny OMS ny talata lasa teo, fa mety ho lasa ivon’ny coronavirus nihany koa ny ao Etazonia. Ny antsasamanila eo amin’ireo fanjakana 50 any Etazonia dia nanapa-kevitra ny tsy fahafahana mivoaka ny trano tanteraka mba hifehezana ny fipariahan’ny coronavirus, saingy ny Filoha Donald Trump kosa naneho ny finiavany hanokatra izany ho an’ny toekarena noho ny fetin’ny paska ny 12 aprily izao. Neken’ny loholona Amerikanina moa ny drafi-panarenana hanokanana vola 2000 miliara dolara any Etazonia.
MATY ANY ESPAGNE
Voadingana ny isa 4000
Nihoaran’i Espagne omaly ny isa 4000 mahery amin’ny olona maty, izay mametraka ity firenena ity ho isan’ny be maty indrindra aorian’I Italie. 655 no maty tao anatin’ny 24 ora. Mitana ny lohalaharana amin’ny habetsahan’ny maty ny ao amin’ny tananan’i Madrid, izay efa nahatratra 2090, arahin’i Catalogne amin’ny isa 672. Mahatratra 56 188 kosa ny trangan’aretina voamarina, izay nisy fiakarana 19% nandritra ny alarobia sy omaly alakamisy.
157 no maty tao anatin’ny iray andro
Firenena voasokajy tao anatin’ny 3 voalohany tamin’ny tahan’ny fahafatesana I Iran tany aloha, saingy nihoaran’i Italie sy Espagne. Na izany aza dia mbola voasokajy ho ao anatin’ny firenena tena voakasika sy be maty indrindra. Manodidina ny 2300 ny olona maty tany an-toerana, ka ny 157 tamin’ireo dia tao anatin’ny 24ora monja. Niampy 2 389 ireo olona voa ka manome ny antontan’isa manontolo ho 29 406.
Nanao antso avo ho an’ny G20
Nanao antso avo mahomby sy voarindra avy amin’ny firenena mpikambana ao anatin’ny G20 sokajiana ho matanjaka sy mamiratra ara-toekarana ny Mpanjaka Saodianina Salmane Ben Addelaziz Al Saoud, mba hiatrehana ity areti-mandripaka ity, nandritra ny fihaonana tamin’ny alalan’ny fampiasana teknolojia fa tsy nivantana nataon’ireo firenena 20 matanjaka indrindra ara-toekarena maneran-tany. Adidintsika ny mandray an-tànana ireo firenena “en developpement” dia ireo firenena sokajiana ho sahirana sy mahantra moa, mba hihoarany krizy sy olana goavana io, hoy izy. Ity mpanjakan’i Arabie Saoudite ity moa amin’izao fotoana izao no mitarika ny G20.